Fampahalalam-baovao sosialy | Martech Zone
Asabotsy 11 Febroary 2012 Alarobia, Desambra 26, 2012 Lorraine Ball
Enimpolo taona lasa izay raha nipoitra ny seho tamin'ny fahitalavitra, dia nitovy tamin'ny doka tamin'ny onjam-peo ny doka fahita. Izy ireo dia misy pitchman iray mijoro eo alohan'ny fakan-tsary, mamaritra ny vokatra iray, mitovy amin'ny fomba fanaony amin'ny radio. Ny tsy nitovizany dia ny fahitanao azy mitazona ny vokatra.
Rehefa matotra ny fahitalavitra, dia toy izany koa ny dokam-barotra. Rehefa fantatry ny mpivarotra ny herin'ny fampitaovana maso dia namorona doka izy ireo hanentanana ny fihetsem-po, ny sasany mahatsikaiky, ny sasany kosa mamy na mampihetsi-po ary ny sasany matotra sy mampieritreritra. Na dia jaded be aza ny mpijery antonony ankehitriny, mbola afaka mihomehy, mihomehy na manao hetsika amin'ny doka mety ihany isika. (Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia ho hitantsika amin'ny Youtube izany).
Ny famolavolana tranonkala dia nandalo dingana iray ihany, hatramin'ny vanim-potoanan'ny brochure dia nifindra tamin'ny sary mihetsika sy sary mihetsika izahay mba hampientanentana ny mpitsidika, ary farany mankany amin'ireo tranonkala tsotra sy sariaka finday, izay mankany amin'ny misy ny mpanjifanay, miaraka amin'ny endri-javatra ifanakalozana hamoronana marketing resaka amin'ny mpitsidika.
Ary ankehitriny, hitantsika ny media sosialy mandalo dingana mitovy amin'izany. Manomboka amin'ny resadresaka ka hatramin'ny fandefasana hafatra momba ny varotra dia mianatra ny mahita ny mahay mandanjalanja eo amin'ny resaka, ny firosoana ary ny varotra atsipy. Rehefa mihalehibe ny mpanelanelana dia maro ireo tompona orinasa kely no mihevitra azy io ho zava-dehibe amin'ny lafiny marketing. mifangaro.
Misy ve izany eritreritra faniriana izany sa tena misy fiovana eo? Tianay ho fantatra izany, koa manao orinasa kely izahay fanadihadiana amin'ny media sosialy ary mampitaha ny valiny tamin'ny taona lasa. Manantena izahay fa hanana valiny betsaka kokoa, fa ny maro amin'ireo fanehoan-kevitra hitantsika hatreto dia maneho mazava tsara io toe-tsaina matotra io.
Avy amin'ny fanadihadiana:
Notsindriako taloha ny momba ny fanaovana bilaogy amin'ny fandaharam-potoana ary manahy aho fa tsy dia avo loatra ny fanisana. Niala sasatra sy bilaogy aho izao rehefa misy lohahevitra mahaliana ahy ary mampiditra ny lahatsoratro amin'ny atrikasa sy fampiofanana mivantana. Tian'ny mpanjifa ny rohy mankany amin'ny lohahevitra mahaliana ary hitako fa efa nitsidika izy ireo - na dia tsy nametraka hevitra aza izy ireo.
Mandany fotoana bebe kokoa amin'ny mpanelanelana kely kokoa. Raha izany no tadiaviko dia mitady ny sehatra vaovao manaraka foana aho, rehefa tonga izany, dia hanome ny iray amin'ireo taloha isika.
Izaho dia miasa mba hamoronana paikady tsotra sy mifantoka izay mifandraika bebe kokoa amin'ireo mpanjifa mety.
Ahoana ny momba anao? Nanova ny fomba fiasao amin'ity haitao matotra ity ve ianao? Mahita valiny ve ianao? Tianay ny manampy ny zavatra niainanao tamin'ny anay fanadihadiana amin'ny media sosialy. afaka minitra vitsivitsy monja (20 fotsiny ny fanontaniana). Avy eo mitady valiny bebe kokoa eto amin'ity lohataona ity.
Mamorona fitsapana mora foana amin'ny fanamarinana
Ny haino aman-jery sosialy